‘मार्न भनेर जंगलतिर लगेका थिए, संयोगले बाँचेँ’ | Jukson
१८ असोज, सप्तरी । मलेसियामा रहेका सप्तरीको हर्दिया गाविस ७ का २३ वर्षीय ओमप्रकाश महतो घर फर्किने तयारी गरिरहेका थिए ।
सम्पूर्ण कागजात तयार पारेका उनले जहाजको टिकट लिन मात्रै बाँकी थियो । कम्पनीबाट छुट्टी लिएर उनी नेपालीले नै सञ्चालन गरेको एसटी होलिडे लजमा एक रात बसे ।
त्यहाँबाट भोलिपल्ट साथीको कोठा जान लाग्दा ९ असोजमा उनलाई दुई जना युवा मिलेर नियन्त्रणमा लिए । यसपछि उनलाई अर्काे लजमा लगियो । त्यहाँ पहिलेदेखि नै सात जना अन्य युवा रहेछन् । सबै मिलेर उनको हात, खुट्टा बाँधे । परिवारलाई उनीमार्फत नै फोन गर्न लगाएर पाँच लाख रुपैयाँ माग्न लगाए ।
ओमप्रकाश मलेसियाको प्रहरी तथा साथीको सहयोगमा सकुशल आफ्नो मुलुक फर्किएका छन् । तर, एउटा प्रश्न छँदै छ, नेपालीले आफ्नै देशका दाजुभाइलाई किन बन्धक बनाए ?
पैसा काठमाडौंका व्यक्तिलाई
मलेसियामा अपहरित ओमप्रकाशले पैसा पठाउन भने पनि त्यो पैसा काठमाडौंका एक व्यक्तिले बुझे । उनलाई बन्धक बनाउन सहयोग गर्ने झापा घर भएका सुजन मगरले काठमाडौंका गोकुल नेवारको नाममा रकम पठाउन ओमप्रकाश मार्फत भनेका थिए ।
तर, गोकुलको नागरिकतामा गोकुल श्रेष्ठ नेवार उल्लेख रहेकाले आईएमईवालाले उनलाई रकम दिएनन् । यसपछि गोकुलले नै ओमप्रकाशका दाइ भागवतलाई फोन गरेर पैसा गोकुल श्रेष्ठ नेवारको नाममा पठाइदिन भने । भागवतले त्यसै गरे ।
ओमप्रकाश बन्धक भएको दुई दिनपछि ११ गते गोकुलले रकम पाएपछि सुजनलाई जानकारी गराएका थिए । बन्धक बनाउनेहरुले त्यसपछि उनको बाँधिएको खुट्टा खोलिदिए ।
तर, उनलाई मुक्त गरेनन् । ‘यसपछि १२ गते उनीहरुले मलाई घना जंगलमा लगेर मार्ने कोसिस गरेका थिए’, सोमबार राजविराज आइपुगेका ओमप्रकाशले नयाँ जीवन पाएको सम्झिँदै भने ‘धन्न एक जना ट्याक्सी चालकले मलाई जोगाएका रहेछन् ।’
ट्याक्सी चालकले स्थानीय प्रहरीलाई सबै कुरा बताएपछि उनको उद्धार भएको थियो । प्रहरीले उनलाई निलाइ भन्ने थानामा ल्याएर सोधपुछ गर्‍यो ।
अपहरणबारे परिवार बेखबर
ओमप्रकाशले जानकारी दिए लगत्तै उनका दाइसहितका व्यक्तिहरुले तत्कालै प्रहरी समक्ष घटनाबारे जानकारी गराए ।
‘सप्तरी, सिरहाका प्रहरीका साथै काठमाडौंका प्रहरी समक्ष पनि जानकारी गराइयो’ ओमप्रकाशसँगै आएका सद्भावनाका युवा नेता दिनेश यादवले भने, ‘रकम लिने व्यक्तिको नाम भन्नेबित्तिकै काठमाडौं प्रहरीले गोकुललाई पक्राउ गर्‍यो ।’
गोकुल पक्राउ परेपछि ओमप्रकाशको परिवारलाई प्रहरीले काठमाडौं बोलायो । यस क्रममा गोकुलले ओमप्रकाशले कम्पनीमा चोरी गरेकाले बचाउन रकम लिएको बयान दिए । तर, मलेसियामा होटल सञ्चालन गरिरहेका गोकुलकै भाइ लीलाले ओमप्रकाशको अपहरणै भएको बताएका थिए । त्यसपछि गोकुलले सुजन मगरले नै त्यसो भनेर आफूलाई उनको परिवारसँग रकम लिई पठाइदिन भनेको बताए ।
असोज १३ गते गोकुललाई महानगरीय अपराध अनुसन्धानको टोलीले पक्राउ गरेको थियो ।
रकम त फिर्ता भयो, तर फेरि यस्तो घटना नहोस्
प्रहरीले ओमप्रकाशको परिवारलाई गोकुल मार्फत पाँच लाख रुपैयाँ फिर्ता गराएको छ । अपराध अनुसन्धान महाशाखाका डिएसपी अजय केसीले रकम फिर्ता गराएर पीडित परिवारसँग जाहेरी पनि लिएका छन् । रकम लिएर मलेसिया पठाउने गोकुललाई तारेखमा छाडिएको छ ।
ओमप्रकाश पनि मलेसियाको प्रहरी तथा साथीको सहयोगमा सकुशल आफ्नो मुलुक फर्किएका छन् । तर, एउटा प्रश्न छँदै छ, नेपालीले आफ्नै देशका दाजुभाइलाई किन बन्धक बनाए ?
असोज १४ गते ओमप्रकाश मलेसियाबाट फर्केपछि सुजन मगरसहित ६ जनाविरुद्व जाहेरी दिएका छन् । प्रहरीले दोषीहरुलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्वता जनाएको छ । पीडित परिवारले आगामी दिनमा यस्तो घटना अरु कसैमाथि नहोस् भनी कामना गरेको छ ।
आज क्वाँटी खाने दिन, स्वादिलो क्वाँटी बनाउने तरिका !
विद्यालयमा १४ वर्ष निःशुल्क सेवा : शिक्षा दिनु मेरो धर्म थियो, पैसा नै मेरा लागि सबथोक थिएन”
हिमालयन ह्वाइट वाटर च्यालेन्ज (कायकिङ) मा पुरुषतर्फ वेलायत र महिला तर्फ आइरिसको अग्रता